Gudiga dib u eegista dastuurka oo sheegay in dhib ay kala kulmeen khilaafka dowladda iyo Maamul gobaleedyada. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAGudiga dib u eegista dastuurka oo sheegay in dhib ay kala kulmeen khilaafka dowladda iyo Maamul gobaleedyada.
Gudiga dib u eegista dastuurka oo sheegay in dhib ay kala kulmeen khilaafka dowladda iyo Maamul gobaleedyada.
November 6, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on Gudiga dib u eegista dastuurka oo sheegay in dhib ay kala kulmeen khilaafka dowladda iyo Maamul gobaleedyada.
Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ah xoghayaha guddiga dib u eegista dastuurka u qaabilsan baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in saameyn weyn uu ku reebay dib u eegista dastuurka lagu sameynayay khilaafka u dhaxeeya dowladda soomaaliya iyo maamul gobaleedyada dalka ka jira.
Senator Xuseen oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday in cutubyadii ay diyaariyeen ee la doonayay in la geliyo wada tashi dadweyne ay garwaaaqsadeen labada guddi ee dib u eegista dastuurka qaabilsan in la hakiyo inta uu jiro khilaafka dowaldda iyo maamul gobaleedyada loona baahanyahay in xalkeeda la gaaro.
Sidoo kale Senator Xuseen Sheekh Maxmauud ayaa hoosta ka xariiqay in hannaanka loo marayo qabyo tirka dastuurka dalka ay ku kala aragti duwanaadeen iyaga iyo xukuumadda soomaaliya, balse ay rajeynayaan inuu soo dhaamaado.
Al-Shabaab oo Sheegtay in Askar ay ku dileen Muqdisho.
Dadka Mareykanka oo u dareeraya goobaha Cod bixinta
682,656 total views, 7,322 views today
682,656 total views, 7,322 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
682,529 total views, 7,321 views today
682,529 total views, 7,321 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
682,560 total views, 7,322 views today
682,560 total views, 7,322 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
682,622 total views, 7,323 views today
682,622 total views, 7,323 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
682,679 total views, 7,321 views today
682,679 total views, 7,321 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]